Soo dejisan DriverMax 8.33 – Vessoft
Soo dejisan DriverMax
DriverMax – software waxtar leh si dhaqso ah oo hufan download wadayaasha ah ee computer ah. software The baaritaanku nidaamka, lafaguraa xogta faahfaahsan oo ku saabsan qalabka iyo bandhigayaa darawallada in ay diyaar u yihiin la rakibey. Dhamaadka scan a DriverMax u saamaxaaya in ay nuqul ka darawallada in ay folder ama in ay iyaga santuuq in archive ah. Sidoo kale software ka kooban module ah in aad u ogolaanaya in ay gurmad iyo soo celin wadayaasha ah. DriverMax awoodo si loo hagaajiyo waxqabadka of your computer iyo wuxuu diyaariyaa ah cayayaanka kala duwan ee nidaamka qalliinka.
Eegidda updates iyo degsado ah darawallada
Macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan qalabka
Lacag iyo soo celinta ee darawallada
DriverMax Software la xiriira:
العربية, English, Українська, Français... Carambis Driver Updater 2.4.2.9632
English, Українська, Español, 中文... Ammyy Admin 3.5